ကို frozen ပျားရည်ထံမှမှိုဟင်းချို agaric ချက်ပြုတ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
အေးခဲမှိုဟင်းချိုအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ agaric ပျားရည်?
မှို ကြော်အတွက်ပိုကောင်းတယ် ပုံမှန်မှိုဟင်းချိုအဖြစ်
ရေခဲသေတ္တာ, ကြက်သွန်နီနှင့်အတူကြော်။ ကြက်သွန်နီ - မှိုတစ်ဝက်လိုပမာဏ။ ရေကိုပြုတ်ပါ။ ထမင်းကြမ်းသေးသေးသောအာလူးနှင့်မုန်လာဥများကိုထည့်ပါ။ ဆားနှင့်ဟင်းချက်ပါ - ရေ - ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်3ကိုပိုမိုဖုံးအုပ်ပါ။ ဆားငရုတ်ကောင်းပင်လယ်အော်အရွက်ငရုတ်ကောင်းကိုထည့်ပါ။ ။ မှိုထည့်ပါ။ မုန့်ကိုဖန်ခွက်တစ်ခွက်ထဲထည့်ပြီးမုန့်ညက်မုန့်ညက်ကိုသွန်းပါ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ဆူဆူညံညံဆူပွက်လာစေရန်ဖုများမရှိစေရန်ပါးလွှာသောတစ်ချိန်တည်းကိုဟင်းချိုထဲသို့လောင်းပါ။ အစာစားချင်စိတ်
အေးစက်နေတဲ့မှို 400 ဂရမ်
အရည်ကျိုဒိန်ခဲ 1 အရာ
ကြက်သွန်မီးသီးပျမ်းမျှအား 1 အရာ
မုန်လာဥ 1 အရာ
ငါတို့မိသားစုတွင်နွေရာသီတွင်ပျားရည်မှိုများနှင့်စုဆောင်းထားသည့်မှိုများအတွက်လမ်းလျှောက်ခြင်းသည်ဓလေ့ထုံးစံဖြစ်ပြီးအလွန်အာဟာရရှိပြီးပရိုတင်းဓာတ်များစွာပါဝင်သောအစားအစာ (ဥပမာ၊ ကြော်ကြော်) ထည့်နိုင်သည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာစမ်းသပ်ပြီးဖြစ်သောအေးခဲနေသောမှိုမှိုမှိုဟင်းချိုကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောပြပါ။ သန့်ရှင်း ကြက်သွန်မုန်လာဥနီများကိုလည်းအခွံခွာပြီးကြိတ်ပြီးလျှင်ကြိတ်ခွဲပါ။ ယခုဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီကိုဒယ်အိုးထဲထည့်ပြီးမြက်ခင်းပြင်ထဲထည့်ပါ။ အအေးနှင့်အခြားမှိုများ၊ အရည်ပျော်၊ သုတ်ခြင်းနှင့်ကြက်သွန်နီနှင့်မုန်လာဥနီများကို skillet ထဲသို့ထည့်ပါ။ အနည်းငယ်ငြိမ်းအေး။ အခုတော့ဟင်းချိုဒယ်အိုးထဲမှာ, ချပ်အာလူးထား, ကြော်, ကြော်, ရေလောင်းနှင့်ချက်ပြုတ်။ ဟင်းချိုအဆင်သင့်ဖြစ်ချိန်တွင်အရည်ပျော်နေသောချိစ်နှင့်ကြက်ဥကြက်ဥကိုထည့်ပါ။ မွှေပါ။ ဆားနှင့်ငရုတ်ကောင်းမှုန့်ကိုနောက်ထပ်5မိနစ်ခန့်မြည်းစမ်းပါ။ ပန်းကန်ထဲသို့သွန်းလောင်းခြင်းနှင့်, ဥပမာ, parsley, အစိမ်းရောင်နှင့်အတူအလှဆင်။ Bon appetit!
Corned brisket ဆေးကြောဆားရေပွက်ပွက်ဆူနေသောထဲမှာချပ်များနှင့်ချက်ပြုတ်သို့ဖြတ်အခါအားလျော်စွာ 1 နာရီအတွင်းရေမြှုပ်ဖယ်ရှားခြင်း။
အေးစက်နေတဲ့မှိုလျှော် defrost နှင့်ဟင်းချိုအိုး၌သွင်းထားလေ၏။ 40 မိနစ်ပြုတ်။ ထိုအခါအန်စာတုံးအာလူး, ဆား, paprika ထည့်ပါ။ 10 မိနစ်ပြုတ်။
ဤအချိန်အတောအတွင်းကြက်သွန်နီနှင့်မုန်လာဥနီများကိုဖယ်ရှားပါ။ ကြက်သွန်နီကို Cube သေးသေးလေးထဲသို့ဖြတ်ပြီးလျှင်မုန်လာဥနီကိုထည့်ပါ။ preheated အပေါ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကြော် ဟင်းရွက်ဆီ ရွှေရောင် - လိမ္မော်ရောင်အထိနှင့်ဟင်းချိုနှင့်အတူပြီနောက်ဟင်း၌ထား၏။
သင်ကမီးဖိုပေါ်တွင်တင်ရေ, နှင့် (ခဲယဉ်းလျှင်မလိုအပ်ပါဘူးမပေးမိလျှင်, အနည်းငယ် thawed, ဖြတ်ဖို့) strips တွေသို့မဟုတ်ချပ်သို့ဖြတ်ထိုအချိန်အတောအတွင်းအေးခဲမှိုအတွက်ရေပွက်သွန်းလောင်းခြင်း, မှိုထားချက်ပြုတ် ... တစ်နာရီဝက်, ထို့နောက်အာလူးထားတော်မူ၏။ ပေါ့ပေါ့တန်တန်တစ်ကြော်ဒယ်အိုးsauté (နေကြာ (ငါပြုမည်ကဲ့သို့) သို့မဟုတ်ထောပတ်ထက် ... ချစ်ရန်), ကြက်သွန်နီအတွက် ... အဟင်းချိုထဲမှာထားလေ၏။ ဟင်းသီးဟင်းရွက် ... ukrom ထည့်ပါ။ parsley, lavrushku ။ သင်အာလူးထားသောအခါ, ရိုင်း2သောအရာတို့ကိုစွန့်ခွာ ... ဒါဟာအပြာကော့နှင့်ဟင်းချို richness သို့မဟုတ် rastolkete ပါလိမ့်မယ်။ အချဉ်မုန့်နှင့်အတူအမှုတော်ကိုထမ်းရွက်။
Posted in, ပထမဦးဆုံးသင်တန်း
66 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,258 စက္ကန့်ကျော် Generate ။